Shaqaalaha SAS oo dacwad ka dhan ah ka gudbiyey ururka shaqaalaha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Johan Nilsson/Scanpix
Shaqaalaha SAS oo dacwad ka dhan ah ka gudbiyey ururka shaqaalaha
La daabacay måndag 11 november 2013 kl 11.45
Boqolaal ka mid ah shaqaalaha shirkadda dayuuradaha ee SAS ayaa dacwad ka dhan ah ka bixiyey ururkooda shaqaalaha ee lagu magacaabo Unionen.
Shaqaalahan ayaa ku andacooneya in ururka shaqaaluhu uu heshiis kula gaarey maamulka shirkadda in meesha laga saaro badankood heshiisyadii horey looga wada-gaarey ee howl-gabka kolka ay shirkadda ka dhacdo xaalad degdeg ah iyo sidii xal loogu gaari lahaa, muddo iminka sannad laga joogo.
Sida uu sheegay gar-yaqaanka Mattias Schain oo amuurta dacwadda gacanta kaga siineya shaqaalaha dayuurradaha ayaa qaba in ururka shaqaaluhu uu galey heshiisyo saameeyneya habka howl-gabka oo aanu ururku wax shaqa ah ku lahayn, sida uu u sheegay war-geeyska maalinlaha ee marka magiisa la soo gaabiyo loo yaqaanno DN (Dagens Nyheter).
Martin Wästfelt, ahana madaxa laanta shuruucda ee ururka ayaa sheegay in ururku uu xaalad cakiran is geliyay, hase yeeshee ay ku jireen xaalad ah laba kala darn mid dooro, in la kala doorto sidii mushaarooyinka shaqaalaha loo badbaadin lahaa ama is-bedel loogu sameeyn lahaa nidaamka howl-gabka. Hase yeeshee sida uu aamin-san yahay Martin Wästfelt inuu ururku taageero middaa ku haystay hadday noqon lahayd dhanka shaqaalaha iyo dhanka xeerkaba iyo in heshiiskaa qalinka lagu duugo.